10 sababood oo aad u Aan Ku rakib habboonayd macruufka 9 Beta
In kastoo technology ayaa laftiisa la casriyeeyay mar kale iyo mar kale in ay adag tahay waxay aaminsan yihiin waa maxay u fiican iyo waxa aan ilaa karay sumaddii. Isla dhibaatooyin la jiifsado macruufka 9 beta oo ballamo ku iman weydo in ay in ay run. Halkan waxaa ku qoran sababaha ma ahan inaad ku rakibto this app cusub:
Arrimaha waafaqsan yahay Chine
Waxaa jira arrimo waafaqsan yahay macruufka 9 beta. Oo ma aad awooddid in uu ordo alaabtaadu xitaa jilicsan sida Whatsapp fluidly halkaas. Dhibaatada waxa ay tahay in ay weli ku sugaan si ay u horumariyaan Chine ay Gordhaw Kadhoofaan 9. arrimaha heli doonaa go'an iyo wararka la riixay oo kaliya marka Apple oo soo bandhigtay macruufka 9 sayidkiisa Golden. Tani waxay dhici doona mararka qaar September.
Waxaa sidoo kale buggy
Versions beta waxay noqon karaan kuwo aad u buggy. Waxay keeni kartaa goobtii ay si shil ama xataa qalabka si reboot. Tani waxay dhici kartaa oo kale oo ku dhex jira oo idinka mid ah qoraal email ah ama dhexe ee call muhiim ah.
Hoos ka macruufka 9
Waxaa suurto gal ah sida in hoos ay u macruufka 8.4 laga bilaabo 9 betas. Si kastaba ha ahaatee, waa in uu barto in ay adag tahay in la soo celiyo qalab aad ka macruufka ah 9 dib ka dib markii heerkii .3 macruufka. Hel diyaar u ah inay soo celiyaan qalabka oo keliya in macruufka ah 8 haddii aad awoodo inaad ka heli kor socon dib. Si kastaba ha ahaatee halista weli in laga yaabaa in aad lumiso xogta u dhexeeya xilliyada aad la casriyeeyay si macruufka 9 ilaa markii aad hoos. The xaqiiqda kale taban waa in aanad awood u yeelan doonaan in ay dib u version hore hoos.
No JAILBREAK suurto gal
Haddii aad qabtid qalab ah oo la jaibroken, mid ka dibna ay ogaadaan in aan aad waayi doonto JAILBREAK loo baahan yahay oo keliya, laakiin sidoo kale waa laga tegi doonaa oo kaliya in aad aallada unjailbreakable. Waxa dhib noqon lahaa tuugada in ay sii daayaan qalab JAILBREAK u beta qoraalkii la heli karo updates software macruufka Midkoodna Apple awood u yeelan doonaan si uu u xaliyo dayacanka ama Imaanshiyaha gaaban loo isticmaalo qalab JAILBREAK ee sida version. Sidaas ballantaas ay tahay isticmaalka JAILBREAK qalabka oo keliya marka Anonymous ayaa sii daayo t awood, waxaa ka version guud ee macruufka 9. Pangu ku hadhay JAILBREAK ee macruufka 8 in la sii daayay dhamaadka October.
Ma filaayo in gabi ahaanba
Ayaa qoraalkii ugu horreeya jira ee macruufka 9 beta aan la filaayo in at dhan. Apple u badan tahay in ay macluumaad ka soo ururiyaan Debug in xitaa caawin u socdaan iyo xitaa hagaajin cayayaanka. Waxa kale oo ay leeyihiin saameyn macluumaadka la hayo iyo waxqabadka. Waxaa jiri doona horumar ka socda wajigii beta ah.
Wajiga beta, Gargaar aan Apple awood u yeelan doonaan in aad gaarto. Sameeysa No sidoo kale kaa caawin doona sida ay tahay oo kaliya wajiga beta ee macruufka 9. One hubaal ay tahay inay sugaan ilaa beta ee soo socda kana soobixiya wax la rajeenayo ama xataa si rasmi ah loo sii daayo final.
App beta Tani ma ballan qaadi mid sida caadiga ah ka fili lahayd ka baxay Apple. Muuqaaladan cusub qabow ku jira wax la mid ah slide ka badan aragtida multitasking kala sida ma noqon doonto o shaqada awood leh qaar ka mid ah barnaamijyadooda xisbiga saddexaad. Horumarinta sidoo kale u baahan yihiin in taageero lagu daro in muuqaalada multitasking wanaajiyey in ay barnaamijyadooda ay baahan yahay.
Waxaa weli waa wajiga beta
Haa waxa la yidhaahdaa waa macruufka 9 beta. Taas macnaheedu waxa weeye, ma aha in la sii daayo dadweynaha iyo waa sidaas oo yareysey ay helaan dadka. Waxaa isticmaali doona wajiga garaaca kaliya marka uu u baahan yahay saddex bilood si uu u xaliyo arimo hartay iyo cayayaanka. Horumarinta sidoo kale u baahan tahay waxaa laga yaabaa in markii u la xariirta barnaamijyadooda.
Waxaa jabin karo barnaamijyadooda aad
Tani waxay si gaar ah beta software leeyahay u janjeera in ay jebiyaan oo dhan codsiyada kale. Sidaas darteed, Apple doonayo software in ay marka hore u tagtaa ku dhiirigelinayaan in uu. Ma jirto sabab macquul ah oo sare oo mid ka mid ah codsiyada bilaaban doono ka dib markii uu si xun u dhaqmayo waxaad gashato this. Waxaa waayeen labada shil ama muujiyaan xasilooni darro guud.
Dhibaatada wayn Fadilid ilaa ay
Software Tani gaar ahaan waa version maxkamad telefoonka gacanta ah. Haddii aad ku guul dareysato in ay dayactir ku dhammaadka wakhtiga ay dhameystir, qalab aad noqon doonaa bricked. Sidaas darteed, waxay taasi keeni kartaa dhibaato badan jadwalka shaqadaada.
The software beta version marna lagu rakibay by sameeysa si toos ah ay qalabka aasaasiga ah. Sida caadiga ah waa inay dhawraan qalabka diyaar u tijaabiyo barnaamijyadooda ku saabsan versions beta ee macruufka. Saasayna caqliga iyo fogaado dhibaato.
Sida loo Hubi Internet Speed ​​on Qalabka Android iyo macruufka
> Resource > macruufka > 10 sababaha ma ahan inaad ku rakibto macruufka 9 beta